Uhuru Kenyatta oo ku baaqay in la iska kaashado la tacaalidda cudurka Covid-19 – Radio Damal
Uhuru Kenyatta oo ku baaqay in la iska kaashado la tacaalidda cudurka Covid-19
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladaha kala duwan ,saaxiibada horumarka iyo hay’adaha maaliyadda ee caalamka ay si dhow iskaga kaashadaan cudurka COVID-19.
Waxaa uu hoosta ka xarriiqay inay lagama maarmaan tahay in si wadajir ah xal loogu raadiyo saameynta dhaqaale iyo midda bulsho ee ka dhashay xanuunkan.
Uhuru Kenyatta ayaa dhanka kale deeq bixiyaasha caalamka ka codsaday inay wadamada qaaradda Afrika garab ku siiyaan qorshayaasha dib u soo kabashada ee ay dejiyeen.
Madaxweynaha ayaa ku nuuxnuuxsaday in caabuqa corona aan si buuxda looga guulaysan karin iyadoo aan garab ka siin Afrika.
Mr. Kenyatta ayaa dowladaha Afrika ku booriyay inaysan ku mashquulin oo keliya ka falcelinta saameynta tooska ah ee cudurka balse ay sidoo kale soo saaraan nidaamyo muddo dheer shaqeynaya oo lagu xaqiijinaya badqabka shacabka.
Madaxweynaha ayaa xusay in casharrada laga bartay la dagaalanka cudurka loo adeegsan doono wanaajinta daryeelka caafimaad , sare u qaadidda dhaqaalaha dijitaalka ah, tiknolojiyadda dhanka maaliyadda , waxbarashada iyo wax soo saarka.